सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक कोरोना भाइरसको चपेटामा कसरी आयो ? - चारदिशा
March 25, 2020 चारदिशा अन्तराष्ट्रिय,समाज
चम्किला सडक, बहुतले भवन र यहाँको वैभवले विश्वलाई सहर कस्तो हुन्छ र कस्तो देखिन्छ भन्ने शिक्षा दिन्छ।
भनिन्छ, यो सहरको तीव्रता कहिल्यै कम हुँदैन। २४ घण्टा, सातै दिन घण्टाघरमा राखिएको घडी अनवरत रुपमा चलिरहन्छ। तर कोरोना भाइरसले यो शहरको तीव्रतालाई रोकिदिएको छ। सडक सुनसान छन., गल्ली खाली छन् भने मानिसहरु घरभित्र कैद छन्।
न्यूयोर्कको म्यानहट्टन क्षेत्रमा बस्ने इप्सिता दत्ताका लागि यो सबैभन्दा नराम्रो सपना भन्दा कम छैन। अहिले भन्दा करिव पाँच वर्ष पहिला कोलकाताबाट न्यूयोर्क सिटी आएकी इप्सिता अहिलेसम्म आफूले न्यूयोर्क सहर यस्तो सुनसान कहिल्यै नदेखेको बताउँछिन्।
न्यूयोर्कमा कोरोनाको असर
कोरोना भाइरसका कारण न्यूयोर्कमा अहिलेसम्म १३१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४ हजार भन्दा धेरै मानिस कोरोना भाइरस संक्रमित छन्।
यदि उमेर समूहको कुरा गर्ने हो भने यो सहरका युवाहरुमाथि धेरै असर परेको छ। अहिलेसम्म कुल संक्रमित मध्ये करिव ५० प्रतिशत मानिसको उमेर १८ देखि ४४ वर्षको बीचमा छ।
यो सबै आँकडा मार्च २४ को हो। यहाँ तारिख यसकारण पनि उल्लेख गर्नुपर्यो किनभने न्यूयोर्कमा कोरोना भाइरस संक्रमण दैनिक दोब्बर रुपमा फैलिरहेको छ। यही कारण न्यूयोर्कका मेयर कुओमोले सहरमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
न्यूयोर्कको जनसंख्या ठूलो खतरा
न्यूयोर्क अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सहर हो। तर यो सहरमा बस्ने मानिस आफ्नै लागि खतरा बनिरहेका छन्।
स्टेनफर्ड युनिभर्सिटीम महामारीको अध्ययन गराउने डाक्टर स्टीभन गुडम्यानका अनुसार यस्तो अवस्थामा धेरै जनसंख्याले दुश्मनको रुप लिन्छ।
अमेरिकाको पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखमा डा. गुडम्यान भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा धेरै जनसंख्या खतरा सावित हुन्छ। धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्र जहाँ धेरै मानिस एकै समयमा एक अर्कासँग भेछघाट गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तोमा भाइरस तीव्र रुपमा फैलिन्छ।’
न्यूयोर्कको मेट्रो रेल जसलाई सबवे भनिन्छ, त्यसमा दैनिक पचास लाखले यात्रा गर्छन्।
जबकि दिल्लीमा मेट्रोमा तीन दिनमा पनि पचास लाखले यात्रा गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा न्यूयोर्क कोरोना भाइरसको केन्द्र किन बनिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो सहरमा सानो ठाउँमा बनेका स–सना फ्लाटमा कयौं हजार मानिस बस्छन्।
उनीहरु एउटै खेल मैदानमा खेल्न जान्छन्, स्विमिङ गर्न जान्छन् र शपिङ गर्नपनि एउटै ठाउँमा जान्छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा सानो ठाउँमा यति धेरै मानिस एक साथ जाँदा भाइरस संक्रमण हुन समय लाग्दैन।
इटली जहाँ कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म ६ हजार भन्दा धरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यहाँ न्यूयोर्कमा प्रति व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी इटली भन्दा पनि धेरै छन्।
न्यूर्योकमा बस्नेको अवस्थाक कस्तो छ ?
बीबीसीले न्यूयोर्क सिटी र आसपासको क्षेत्रमा बस्ने मानिससँग त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जान्ने कोशिश गरेको छ। कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्ने इप्सिता भन्छिन्, ‘अहिले न्यूयोर्क सिटी कुनै भुताहा सहरमा परिणत भएको छ। ब्रडवे थिएटर जुन यहाँको पहिचान हो, त्यो बन्द भइसकेको छ। मानिसहरु यति धेरै डराएका छन् कि एकअर्कासँग कुरा गर्नसमेत मुश्किल हुन थालेको छ।’
इप्सिता यतिबेला आफ्ना केही सहयोगी र साथीसँग युनिभर्सिटीमा नै बसेकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘जब हामीकोठाबाट बाहिर निस्किन्छौं तब हाम्रो हातमा ग्लब्स र मुखमा मास्क हुन्छ। हिँड्दा पनि मानिसहरु एक /दुई मिटरको दूरी बनाएर हिँड्छन्। गल्तीले कोही मानिस नजिक आएभने मानिसहरु डराउँछन्।’
घरविहीन भए विद्यार्थी
न्यूयोर्कमा तमाम यस्ता एजुकेशन इन्स्टिच्यूटशंस छन् जहाँ इप्सिता जस्ता लाखौं विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष पुग्छन्।
इप्सिताका अनुसार केही संस्थानले आफ्नो डोरमेटरिजमा बच्चा राख्न अस्वीकार गरेका छन्।
उनी भन्छिन्, ‘संक्रमणको खतरालाई मध्यजनर गर्दै कयौं स्थानमा विद्यार्थीलाई डोरमेटरिज (जहाँ एउटै कोठामा दर्जनौं विद्यार्थी बस्छन्) खाली गराइएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई रात बिताउन समेत समस्या भएको छ। तर केही मानिसले आफ्नो घरका ढोका यस्ता विद्यार्थीका लागि खोलिएका छन्।’
योसँगै कोरोना भाइरसका कारण ती विद्यार्थीको जीवनमा निकै ठूलो असर परेको छ, जो आफ्नो डिग्री पूरा गरेर जागिर खाने कोशिशमा थिए।